सुत्नुअघि पैतालामा तेल लगाएर त हेर्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ चमत्कार ! (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > सुत्नुअघि पैतालामा तेल लगाएर त हेर्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ चमत्कार ! (भिडियो)
सुत्नुअघि पैतालामा तेल लगाएर त हेर्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ चमत्कार ! (भिडियो)
admin September 11, 2020 जीवनशैली, भिडियो, स्वास्थ्य	0
एजेन्सी । हाम्रो गाउँ घर तिर अझै पैतालामा तेल लगाउने प्रचलन छ। शरिर दुखेमा तेल लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। पुरानै प्रचलन भएपनि शरिर दुख्दा तेलले मालिस गर्नु राम्रो हो । शरिरको हरेक दुखाइ कम गनै तेलले मालिस गर्नु निकै राम्रो मानिन्छ । तपाइको शरिर दुखेको छ भने अथवा राति सुत्दा जहिले पनि पैतालामा तेल लगाउनु राम्रो हुन्छ।
राति निद्रा नलागेर छटपटी हुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्, पाउनुहुनेछ…
पैतालामा तेल लगाउदा गोडासम्बन्धी, जोर्नीको दुखाइ र खुट्टाको दुख्ने समस्या ठिक हुन्छ। पैतला र जोर्नी नियमित तेलले मालिस गर्दा रक्तसञ्चारमा सुधार आउने मात्र होइन दुखाइ पनि कम हुन्छ। तेल लगाउनाले शरीरका विकार र विषाक्त पदार्थहरूलाई शुद्ध पार्ने काम गर्छ । तनावबाट छुटकारा पाउन पनि पैतालामा तेल लगाउनु राम्रो हुन्छ।
रक्तचाप कम भएका बिरामीहरूले राति सुत्नुअघि पैताला मालिस गर्नु राम्रो हुन्छ । पैतालामा तेल लगाउदा टाउको दुख्ने समस्या पनि हट्छ । पैतालामा तेल लगाउने गर्दा शरीरबाट नचाहिने एसिडहरू बाहिर निस्कन्छ । सुत्नुअघि तेल लगाउदा थकान पनि हराउँछ।
राती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती!